Indha Cadde: Galaal waxaa dilay Ciidanka Dowladda | KEYDMEDIA ONLINE
Indha Cadde: Galaal waxaa dilay Ciidanka Dowladda
Isagoo wareysi siinayay Idaacadda Radio Kulmiye ee Muqdisho, ayuu sheegay in Galaal uu dagaalamay islamarkaana uu aamisan yahay in Al-Shabaab-ka ku jiray hotel-ka uu isagu dilay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Jeneraal Yuusuf Siyaad Indha Cadde ayaa sheegay in Ciidanka dowladda ay dileen Jeneraal Galaal intii uu socday howlgalkii Afrik hotel oo 31-kii bishii January ay galeen dabley hubeysan oo Kooxda Al-Shabaab katirsan.
Wuxuu xusay in Jeneraal Galaal uu haystay qori AK-47 ah, islamarkaana uu dagaalamayay intii ay ragga hubeysan gudaha ku jireen, isagoo ka dagaalamayay barandada qolka uu ka deganaa Afrik hotel.
Indha Cadde oo u waramaya Idaacadda Radio Kulmiye ayaa su'aallo ka keenay qaabkii uu u dhintay Galaal, isagoo sheegay in hal xabad ay dishay Jeneraalka taasoo dhinaca dambe ee qoorta uga taallay. Wuxuu tilmaamay inaysan suurta-gal ahayn qof dagaalamaya oo cadow hortiisa taagan yihiin in qoorta laga toogto.
Keydmedia Online · General Indha Cadde: Galaal waxaa dilay Ciidanka Dowladda
"Jeneraal Galaal ku sugnaa Barandada qolkiisa, halkaas oo Meydkiisa loogu tagay iyadoo uu dul-saaran yahay nin Shabaab ah oo Bam F1 gacanta ku haysta, kaasoo aan aaminsanahay in meel kale lagu soo dilay balse markii dambe meydkiisa la keenay meesha Galaal uu meydkiisa yaallay," ayuu yiri Indha Cadda.
"Ninka Shabaabka ah iyo Galaal waxaa la geliyay qol 2 mitir ah meydadkooda, taasoo dhalisay su'aallo badan oo ku saabsan sidee dad dagaalamayay hal qol ugu wada dhiman karaan," ayuu hadalkiisa raaciyay.
Ciidamada Haramcad ee booliska Soomaaliya katirsan oo dhalinyaro u badan ayaa galay hotel-ka oo 8 saacadood ka dhex dagaalamayay, iyagoo burburiyay Kaamirooyinkii CCTV-ga, waxayna bililiqeysteen wax walba oo muhiim ah oo dhismaha ku jiray, oo ku jiro qoriga AK47-ka uu Galaal ku dagaalamayay.
Galaal wuxuu ahaa nin u diyaarsan weerarka hotel-ka oo horey uu qolkiisa u dhigtay qori isku difaaco hadii naftiisa khatar gasho, iyadoo Indha Cadde uu aaminsan yahay in qaar kamid ah raggii Al-Shabaab uu isaga dilay.
Markii ay galeen hotel-ka, dableyda Al-Shabaab waxay toos u abaareen qeybtii uu deganaa Galaal, isagana uu iska difaacay, qaarna ka dilay. Markii Ciidanka dowladda gudaha usoo gudbeen iyadoo aan wax rasaas ah dhicin mudo kadib hal mar la maqlay xabado badan kadibna askartu ay sheegeen inay dileen qofkii ugu dambeeyay Al-Shabaab.
Rasaastii dambe ee dhacday ayuu Indha Cadde sheegay in Galaal lagu dilay kadibna raggii Al-Shabaab meydadkooda qolkiisa loogu geeyay oo hal meel la dhigay si looga dhigo in Jeneraalka ay dileen dableyda.
Wuxuu dalbaday Indha Cadde in baaritaan buuxa lagu sameeyay dilka Galaal, oo ahaa shaqi aad u dhaliili jiray siyaasadda Farmaajo oo warbaahinta Muqdisho ka hadli jiray mudooyinkii dambe.